Starkvind no raikipohy IKEA hamerenana ny mpanadio rivotra | Gadget News
Miguel Hernandez | 29/11/2021 13:00 | General, hevitra
Miasa mafy i IKEA amin'ny fampiharana ireo vokatra isan-karazany izay afaka mahafaoka ny "automatique an-trano fototra" an'ny trano manara-penitra. Porofon'izany ny fiaraha-miasa tsy tambo isaina miaraka amin'i Sonos izay azontsika nojerena teo aloha, ary koa ny dikan-teny voalohany amin'ny mpanadio rivotra azo idirana izay nosedrainay ihany koa.
Fotoana hanadiovana ny vokatra izao, ary izany no hevi-dehibe tamin'ilay vaovao Starkvind, mpanadio rivotra ambony latabatra misy endri-javatra mifanentana. Mijanòna miaraka aminay ary fantaro hoe inona no misy an'ity mpanadio rivotra miavaka avy amin'ny IKEA ity izay mampihorohoro ny marika hafa amin'ity tsena ity.
1 Fitaovana sy famolavolana: Sarotra ny mahafantatra fa mpanadio izy io
2 Assembly sy configuration
3 Ny fahaiza-manao fanadiovana sy ny toetra ara-teknika
Fitaovana sy famolavolana: Sarotra ny mahafantatra fa mpanadio izy io
Ary ny lohateny amin'ity fizarana famolavolana ity no famintinana tsara indrindra amin'ilay fitaovana ary izay heveriko, raha ny fomba fijeriko fanetren-tena, no tena tsara indrindra. Sarotra ny mahafantatra hoe inona izany raha tsy miteny aminao izy ireo, ary tsara izany, satria latabatra izy io. Araka ny efa nambarantsika, latabatra iray manana fahafahana manadio ny rivotra ary manana rafitra fametrahana IKEA mahazatra izay tianao, na fankahalana. Nianatra lesona sarobidy aho rehefa nanamboatra ny tranoko, tsy maintsy mividy ny screwdriver elektrika IKEA foana ianao, hahazo fahasalamana sy fotoana ianao.
Loko: Brown maizina / White Oak
Kinova: Miaraka amin'ny latabatra mitambatra / Amin'ny fomba manokana
Ny habeny: 54 x 55 santimetatra
Saingy aoka isika tsy hivily ary hanohy hiresaka momba ny Starkvind, ilay mpanadio IKEA izay na dia ao anatin'ny ny modely 149 euro dia mety ho latabatra sisiny 54 x 55 cm, Azontsika atao ihany koa ny mividy izany amin'ny dikan-teny 99 euro, izay mametra azy io ho mpanadio lehibe iray izay manana tongotra metaly mahazatra amin'ny fomba modely teo aloha. Ny tariby 1,50 metatra dia ampidirina amin'ny tongotra iray (tadidio izany rehefa mametraka azy) ary mifangaro tsara amin'ny manodidina, na izany aza, izany dia mametra noho ny antony mazava tsara ny toerana misy ny latabatra, izay tokony hapetraka eo akaikin'ny iray. rindrina, na sofa mba tsy hisy tariby mampidi-doza mihantona manodidina.
Assembly sy configuration
Amin'ity fametrahana ity dia hiankina betsaka amin'ny mpampiasa sy ny toetrany. Zara raha 10 minitra vao nahavita ireo dingana 13 aho. Ny latabatra dia zara raha misy visy valo izay apetraka miaraka amin'ny lakile Allen tafiditra sy ny fonony miendrika kitiho, ny ambiny dia asa fanangonana fanadiovana kokoa toy ny fametrahana ny sivana sy ny wiring.
Raha ny configuration dia tsotra. Ny sivana voalohany dia efa tafangona fa ao anaty kitapo, ka tsy maintsy miditra amin'ny cabin izahay ary mandoa izany. Rehefa vita izany dia apetrakay ny sivana fanadiovana entona faharoa izay azonao vidiana misaraka amin'ny € 16 (mety ho an'ny fofona).
Izao no fotoana hanararaotra ireo endri-javatra automatique an-trano. Ity Starkvind ity dia manana fifandraisana amin'ny rafitra IKEA Tradfri, ka afaka miasa amin'ny fampiharana IKEA Home Smart izahay. Tsy ilaina ny milaza fa ny "tetezana" Tradfri tena ilaina tokoa izany. Araho fotsiny ireto dingana manaraka ireto:
Manokatra ny fampiharana izahay ary misafidy ny fitaovana
Manindry ny bokotra fampiarahana izahay rehefa angatahana
Mifandray ho azy
Ankehitriny dia mila mampiditra azy amin'ny Apple HomeKit na Alexa's Amazon isika ary mankafy. Raha ny marina, ity no vokatra IKEA Tradfri voalohany nampiasa ny rafitra fanakambanana mandeha ho azy amin'izany fomba izany, ary zavatra tokony hisaorana izany.
Ny fahaiza-manao fanadiovana sy ny toetra ara-teknika
Manomboka amin'ny toetra ara-teknika fototra isika, ity fitaovana ity dia manana fomba "automatique" miaraka amin'ny herin'ny tanana dimy izay hamoaka tabataba miankina amin'ny fahaiza-manao fanadiovana:
Ambaratonga 1: 24 db amin'ny 50 m3
Ambaratonga 2: 31 db amin'ny 110 m3
Ambaratonga 3: 42 db amin'ny 180 m3
Ambaratonga 4: 50 db amin'ny 240 m3
Ambaratonga 5: 53 db amin'ny 260 m3
Ahoana no fomba hafa, fanjifana herinaratra koa hitombo tsikelikely izany, eo anelanelan'ny 3W amin'ny fomba kely indrindra ary 33W amin'ny fomba ambony indrindra. Toy izany koa, manana andiana singa tsy maintsy tazonina isika.
Sivana mialoha: Fanadiovana roa na efatra herinandro
Sensor kalitaon'ny rivotra: Isaky ny 6 volana
Sivana particulate: Soloy isaky ny 6 volana
Sivana entona: Soloy isaky ny 6 volana
Fomba automatique Amin'ny lafiny iray, hisafidy ny hafainganam-pandehan'ny mpankafy araka ny kalitaon'ny rivotra noho ny PM 2,5 metatra. Mba hanoloana ny sivana rehefa miseho eo amin'ny tontonana fanaraha-maso ny fampitandremana, dia tsy maintsy manindry ny bokotra «Reset» hita ao anatiny isika, mandritra ny telo segondra farafahakeliny mandra-pialan'ny famantarana.
Araka ny voalazanay, ny sivana mahazatra dia ampiasaina hanesorana vovoka, vovobony ary allergen hafa entin'ny rivotra (PM 2,5). Amin'ny lafiny iray, ny sivana entona dia ahafahantsika manafoana ny setroka, ny entona ary indrindra ny fofona, fitaovana iray amidy misaraka ary raha ny fahitako azy dia ilaina, Eny ary, raha tsy misy izany dia tsy ananantsika ny iray amin'ireo toetra izay ho ahy indrindra no mahaliana indrindra amin'ireo mpanadio ireo, ny fofona. Amin'ny fotoan'ny hatsiaka dia mahaliana ny maha-"ventilation" ny trano tsy mila manokatra varavarankely, ny maraina tsara sy ny fofona madio tsy hay lazaina.
Amin'ny maha-tombony dia manana endrika izay ihany izahay IKEA dia afaka nanolotra hatramin'izao ary izany dia manafaka antsika tsy hanamarina ny fametrahana ny mpanadio, izay matetika no mahatonga antsika tsy hody. Ankehitriny dia tsy maintsy manolo ny iray amin'ireo latabatra ankilany amin'ity Starkvind ity izahay ary manana roa-in-iray. Ity endrika ity dia miasa tsara indrindra amin'ireo trano voaravaka singa IKEA, saingy tsy miandany izy ireo, Tsy hifandona amin'ny ankamaroan'ny tontolo izy ireo ary hahatonga azy ho tonga lafatra na dia ho an'ny birao aza.
Amin'ny haavon'ny fahafaham-po dia nahita fahombiazana tsara izahay na amin'ny resaka fanadiovana rivotra sy fanafoanana ny fofona, miaraka amin'ny fampidirana tanteraka amin'ireo singa automatique an-trano ary na dia ny IKEA aza. jamba marani-tsaina ity izay efa notsapainay teo aloha. Amin'izao fotoana izao, ny Starkvind ho an'ny 159 euros dia toa safidy tsara hodinihina.
Navoaka tamin'ny: Novambra 29 avy amin'ny 2021
Fampidirana amin'ny automation an-trano
Fahaizana fanadiovana sy fahatsorana
Mitaky ny tetezana Tradfri
Ny dikan-tsy misy latabatra dia tsy dia manintona loatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Starkvind dia raikipohy IKEA amin'ny fanavaozana ny mpanadio rivotra [Analysis]